Ao Meksika, dia maro ny fomban-drazana guide mampiaraka ny fifandraisana. Raha mbola tanora kokoa ny olona any amin’ny tanàna lehibe dia mety ho voasariky ny Etazonia, ny olona tamin’ny kokoa ny faritra ambanivohitra mba hitazona ny fomban-drazana, indrindra fa ireo fehezin’ny Katolika ny soatoavina sy ny fomba amam-panao nentim-paharazana an’ireo fianakaviana Meksikana. Araka ny fomba nentim-paharazana ao Meksika, ny lehilahy rehetra ny vehivavy manomboka ny fifandraisana amin’ny lehilahy ny fanohizana. Ny vehivavy dia fomba nentim-paharazana miandry ho an’ny olona mba hanaraka azy, na ho mandihy amin’ny antoko na fikambanana na ho any amin’ny daty. Raha tanora eo amin’ny tanàna lehibe kokoa mety hanaraka maoderina kokoa fahazarana, ny olona kokoa any ambanivohitra sy mpitahiry ny nentin-drazana any amin’ireo faritany manaraka izany fomba fanao izany.
Ny lehilahy dia ireo mahalala fomba, ny fanokafana varavarana ho an’ny vehivavy sy mitarika avy seza. Ny lehilahy no antenaina ho tantaram-pitiavana sy tsara-mahalala fomba. Iray mampiaraka ny fomban-drazana malaza any Meksika sy ny hafa miteny espaniola ny firenena dia ‘pyrope,’ izay dia ny fomba ny olona liana amin’ny vehivavy. Pyropes dia flirty fanehoan-kevitra nahatonga ny vehivavy, indraindray dia ahitana endearments toy ny hoe ‘mi amour,’ izay midika hoe ‘ny fitiavana,’ sy ‘goavy,’ izay midika hoe tsara na maha-te ho tia. Hafa Meksikana mampiaraka ny fomban-drazana dia ‘la serenade,’ ny fomba fanao izay suitor tonga tao ny fitiavany tombontsoa ny an-trano miaraka amin’ny mariachi na mpitendry gitara mba serenade na mihira ho azy. Ny olona mbola mihira mandra-ny vehivavy iray tonga avy azy tany an-trano mba hitsena azy. Raha ny vehivavy tsy tia ny suitor, izy dia tsy mivoaka mba hitsena azy. Fomba nentim-paharazana, ireo vehivavy tanora miaina ny fanabeazana ny fianakaviana mandra-manambady. Raha fianakaviana iray tsy toy ny suitor, ny fianakaviana mba hanipy rano azy. Ao Meksika, ny fiarahana amin’ny olona dia maneho ny mpiara-mitory amin’ny voninkazo, sôkôla, hatramin’ny kilalao tiany indrindra amin’ny biby, ary hafa ny famantarana ny fankasitrahana ao anatin ny fiarahana dingana.
Lehilahy nentim-paharazana handoavana ny daty, ihany koa
Fomba nentim-paharazana, Meksikana iray miezaka ny vehivavy ho mpandala ny mahazatra, dia miandry ny fifandraisana lehibe eo anatrehan’ny manao firaisana ara-nofo. Ny olona voka-dratsiny ny vehivavy mifarana ny fifandraisana raha izy fanerena azy hanao firaisana, indrindra fa ny any amin’ny faritany ary eo amin’ny tanora sy mbola tsy nahita fiainana. Beth Cone dia monina ao Los Angeles mpanoratra sy ny fomba sy ny fahasalamana, ny hatsaran-tarehy, ary mendrika ho an’ny mpanao gazety ‘ny Boulevard Gazetiboky’ tao San Fernando Lohasahan-gazety mifototra avy amin’ny alalan’ny. Izy ilay mpanao gazety sy mpanakanto solontenan’ny amin’ny mpanjifa ao amin’ny faritra Avaratra sy Atsimon’i California. Nahazo diplaoma avy Vanderbilt Oniversite, Cone manana mari-pahaizana amin’ny teny espaniola sy ny tsara zava-kanto
← Meksikana Aterineto
Mampiasa Meksikana Cupid Hihaona Matory amin'ny Ankizivavy maimaim-Poana ny Ankizivavy Lanitra →